တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရန်သေချာနေပြီ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
မုန်တိုင်းအဆင့် ၂ (CAT-2) ရှိနေသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) – 23W သည် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် စနေနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် Aurora ပြည်နယ် Casiguran ကိုဖြတ်ကျော်၍ ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE မှ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တော့မည့် ခန့်မှန်းချက်မှာ သေချာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် ဆက်လက်၍ Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Northern Pangasinan, La Union တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး Pangasinan ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Lingayen Gulf-Cape Bolinao Area မှ ဖြတ်ကျော်ကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းချက်များကို T2K မှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
တိုင်းဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE သည်နိုင်ဝင်ဘာလ ၂ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ် အလယ်ပိုင်းဆီသို့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ် အားလျော့လျှက် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် အားပျော့ပျက်ပျယ် သွားနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE သည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီခွဲ (0300 UTC) တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့ဘက် ၆၂၅ မိုင်အကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေမည်ဖြစ်ကာ မုန်တိုင်းဗဟို၌ မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် ပေ ၃ဝ အထိရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁ဝ၄ မိုင်မှ ၁၂၇ မိုင်အထိရှိနိုင်ကြောင်း ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ရရှိသည့် data များအရ သိရပါသည်။
မုန်တိုင်း၏ လမ်းကြောင်းအား လာမည့် ၅ ရက်အတွက် WUND မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ထားခြင်းအား အောက်ပုံတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ mmweather မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေဦးမည့်အခြေအနေအားစောင့်ကြည့်၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
NING Community Network ပေါ်ရှိ http://mmweather.ning.com တွင်လည်း အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်လက် တင်ပြပေးလျှက်ရှိပါသည်။
click on pictures to view original size
Posted in Uncategorized. Tags: MIRINAE, strike-land, typhoon, weather.3Comments »
3 Responses to “တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရန်သေချာနေပြီ”
အထက်ပါ post ၏ အောက်/ညာဘက်မှ ပုံ အား click လုပ်၍ ကြည့်လျှင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE ၏ လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု အခြေအနေမှာ ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်လမ်းကြောင်း၏ တောင်ဘက် မိုင် ၉ဝ ခန့်အထိသို့ ရောက်ရှိသွားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
တောင်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းရွေ့ လာမှုကြောင့် ပိုမိုပူနွေးသော ပင်လယ်ရေနှင့် ပိုမိုစွတ်စိုသော လေထုနှင့် တွေ့ထိခြင်း ပိုမိုများလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် မုန်တိုင်းအင်အားသည် လျော့ကျသွားခြင်းမရှိပဲ ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာချိန်တွင် ယမန်နေ့က အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၉ မိုင်ဖြင့် ရွေ့လျားမှုနှုန်း ရှိခဲ့ရာမှ ယခုနောက်ဆုံးတိုင်းတာရရှိသည့် data များအရ အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၅ မိုင်နှုန်းအထိလျော့ကျလာခဲ့ပါသည်။ သိသိသာသာ လျော့ကျလာခြင်းကား မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု အခြေအနေအား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ရေ၏ အပူချိန်မှာ ၂၉° C ရှိနေပြီး အလွန်ပူနွေးနေသည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ(အနောက်ဘက်သို့) ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသကဲ့သို့ အင်အားသိသိသာသာ တိုးလာခြင်းလည်းမရှိပါ။ မုန်တိုင်းမျက်စိဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ဦးတည်သွားရာလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် Tropical Cyclone Heat Potential (TCHP) မှာ 80 – 100 kJ/cm^2 ရှိနေပြီး ဤအခြေအနေသည် လာမည့် ရက်များအတွင်း ရုတ်တရက် အင်အားပိုကောင်းလာနိုင်ခြင်းမျိုးရှိနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ LUZON ကျွန်းသို့ ဆက်လက်ဦးတည်တိုက်ခတ်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE အနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ အချိန်ခန့်မှန်း 0600UTC ခန့်၌ ကုန်းတွင်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ချိန်မတိုင်မီ အဆင့်-၃ နှင့် အထက်လေတိုက်နှုန်းများဖြစ်ပေါ်ပြီး အားပိုမိုကောင်းလာနိုင်သေးကြောင်း သိရပါသည်။
View more on Bloomberg.comhttp://bit.ly/1fYuEs
Oct. 29 (Bloomberg) — Philippines authorities warned of flooding and landslides as Typhoon Mirinae strengthened over the Pacific and bore down on the main island of Luzon, where more than 900 people were killed in two cyclones in the past month.
Mirinae’s winds increased to 160 kilometers (99 miles) per hour from 136 kph yesterday as it headed west toward Luzon, the U.S. National Weather Service said on its Web site. The storm was centered 1,150 kilometers east of the city of Casiguran on Luzon at5a.m. local time.
The storm is forecast to hit the coast at4a.m. on Oct. 31 near Casiguran. Luzon, the Philippines most populous island, is reeling from two cyclones that killed at least 929 people since Sept. 26. Typhoon Lupit also approached Luzon last week before turning away. . . .
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI)(23W) update#3
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) တောင်ဘက်ထပ်ဆင်း »